Waxaan helay boggaan internetka ah. Waxaana jeclahay in aan oggaado dadka iiga jawaabaya su’aalahayga. Yaad tihiin idinka? – Tips for refugees
Previous Previous post: Aabe diimeedkayga wuxuu i siiyey (13) teleefoon casriyaysan. Wuxuuna doonayaa in uu i dhunkado oona hab i siiyo marka uu iga tagayo. Ma xuntahay ama qalafsantahay in aan ku iraahdo anigu midaasi ma jecli?
Next Next post: Saaxiibkayga oo jira (15) iyo aniga oo jira (15) aad ayaynu isku jecelnahay. Wuxuuna doonayaa in uu galmo ila sameeyo. Ma ku khasbanahay in aan galmo la sameeyo si uusan iiga tagin?